Nengozi Munamato WePfungwa Kuti Uparadze Nzvimbo Dzakaipa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Nenjodzi dzemunamato wePfungwa Kuti Uparadze Nheyo Dzakaipa
Nenjodzi dzemunamato wePfungwa Kuti Uparadze Nheyo Dzakaipa
Ezekieri 18:20 Mweya unotadza, uchafa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, uye baba havangavi nemhosva yezvakaipa zvemwanakomana;
Nhasi tichave kutarisa kune munamato une njodzi yekuparadza nheyo dzakaipa. When the hwaro hazvina kunaka, zvese hazvina kunaka. Ukaona muti wasvava, hwaro hwakatofa. Muhupenyu zvakare, hwaro hwedu hunosarudzawo kunaka kwehupenyu hwedu. Akawanda matambudziko ayo vanhu vanosangana nawo muhupenyu anoteedzerwa kune isina chikonzero hwaro. Iyo inogona kuve isina kukanganisa hwaro hwaro, hwaro husina kunaka hwemweya kana zvese zviri zviviri. Nheyo isina kunaka yeyakakora inogona kunge isiri dzidzo, hurombo uye zvimwe zvinhu zvemuviri zvinogona kukanganisa imwe hwaro. Munyaya ino nhasi, tichave takatarisa hwaro hwakaipa, uye nzira yekubuda mairi kuburikidza neminyengetero yechisimba. Iyi nheyo dzakaipa nheyo dzemweya uye dzinogona kungogadziriswa pamweya. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yemanamato nhasi, Mwari wekudenga achagadzirisa hwaro hwako muzita raJesu.
Chii Chinoita Nheyo
Nheyo inongova midzi yako, mutsara uye / kana nhoroondo yemadzitateguru. Nheyo yemweya inotaura nezve yemweya mamiriro kana mamiriro emidzi yako. Kana madzitateguru ako akashumira Mwari weDenga, saka hwaro hwako hwomweya hwakaropafadzwa uye hunatsveneswa. Asi kana madzitateguru ako ari vanamati vemadhimoni, saka hwaro hwako hwasviba uye hwakaipa, iwe unofanirwa kuzviparadzanisa kubva kunevese mweya yakaipa zvibvumirano. Iko kukanganisa kwakawanda kunoitwa nema Kristu iwawa, vanofunga kuti nekuda kwekuti ikozvino vaponeswa, kuti vakasununguka pamasimba erima, uye nheyo dzakaipa. Hongu wakasununguka kubva kwavari, asi ivo havana kusununguka kubva kwauri, wakavasiya asi havana kukusiya. Dhiyabhorosi achazouya achikutevera iwe zvisinei nekuti uri chisikwa chitsva kana kwete. Dhiabhori akasindimara uye anoshingirira, saka kuti umukunda, iwe unofanirwa kumuramba muminyengetero. Iwe unofanirwa kugara uchiita munamato une njodzi kuti uzvimise pachako kubva pane zvese zvakashata zvibvumirano zvinoshanda zvichirwisa hupenyu hwako. Munamato uyu une njodzi unonongedza kupaza nheyo dzakaipa uchakupa simba rekusiyana kubva kuna dhiabhori nezvibvumirano zvake zvese zvakaipa muzita raJesu. Namata uyu minamato mukutenda nhasi uye gamuchira rusununguko rwako.
1. O Ishe, ndisimbisei pabasa rose rakanaka, muzita raJesu
2. Ndinoti hupenyu hwakareba uye budiriro, muzita raJesu
3. Mwari worugare, ndiitei vatsvene zvizere, muzita raJesu
4. Kristu ngaagare zvakanaka mumoyo mangu nokutenda muzita raJesu
5. Ini ndinoremadza simba rose rerufu uye gehena rinotarisana neni, muzita raJesu
6. Ini ndinoti sununguko kubva pakurwiswa nebakatwa chero ripi zvaro raSatan, muzita raJesu
7. Handifi ndafa asi ndichararama kuti ndizivise mabasa aIshe muzita raJesu
8. Rega muviri wangu wemweya nemweya ngazvichengetwe zvisina mhosva kusvika pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu, muzita raJesu
9. Ndinozvidza rubatsiro rwevatumwa uye dziviriro, muzita raJesu
10. Ishe, regai ini ndive nezvibereko mune rimwe nerimwe basa rakanaka muzita raJesu
11. Ndinoraira mutorwa wese mumuviri wangu kuti abve zvino muzita raJesu
12. Shoko raIshe ngarive nemahara uye rikudzwe muhupenyu hwangu muzita raJesu
13. Ini ndinoraira vavengi vangu vese vanoteera kuti vawe nekuda kwangu muzita raJesu
14. Ndinoraira simba rese remadzitateguru rinoshanda kwandiri kuti riwe uye riparadzwe muzita raJesu
15. Ndinozivisa kuti ndichava pamusoro chete uye kwete pasi muzita raJesu Kristu
16. Rega ndizadziswe neruzivo rwezvido zvaMwari muzita raJesu
17. Ini ndinozivisa kuti munhu wese anondikomborera akaropafadzwa uye munhu wese anondituka akatukwa nemuzita raJesu
18. Kurega kuzodzwa kuve kunopfuura kukunda kunokunda pandiri, muzita raJesu
19. Ndifambei ndakafanira Ishe kuna zvese zvinofadza, muzita raJesu
20. Ini ndinotsika pamusoro pechese chinetso nenyoka nechinya muzita raJesu.
21. Kuzvinatsa kwese kwa satanic kunotaura zvakaipa pamusoro pangu, kukanganiswa nesimba iriropa raJesu.
22. Ini ndinosuka chese chikafu nekunamata zvidhori kwandadya, muzita raJesu.
23. Zvese zvakaipa zvisingazivi, aritari yemukati, yakagochwa, muzita raJesu.
24. Iwe dombo remhinganidzo, rakavakwa nemasimba akaipa eimba yababa vangu, ribviswe, muzita raJesu.
25. Izwi rehwaro hwesimba remba yababa vangu harizotaurazve, muzita raJesu.
26. Wese murume akasimba akapihwa nemasimba akashata eimba yababa vangu kurwisa hupenyu hwangu, anofa, muzita raJesu.
27. Wese satanic promissory noti, yakapihwa ini nemadzitateguru angu, batai moto, muzita raJesu.
28. Hembe dzekushora, dzakagadzirwa nemasimba akashata eimba yababa vangu, yakagochwa, muzita raJesu.
29. Chero gore ra satanic pane hupenyu hwangu, pararira, muzita raJesu.
30. Kubwinya kwangu, kwakavigwa nemasimba akashata eimba yababa vangu, kwakauya hupenyu nemoto, muzita raJesu
Previous nyayaMinamato Pamusoro peVavengi Vemhuri Asina Kupfidza
inoteveraMinamato Pamusoro pekuve Mukati meChitungwiza kana Mutirongo Muhope
Jean philippe Kubvumbi 21, 2020 At 1:58 am
Ndinokutendai zvikuru ndinoda rubatsiro ndiri kurwisana nehuroyi huviri imwe wizard ndibatsireiwo minamato
Zuva nezuva kuverenga bhaibheri kuronga kwaNovember 9th 2018